Anshaxa suxufiga iyo kaalinta baahinta xogta dhibbanaha | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Anshaxa suxufiga iyo kaalinta baahinta xogta dhibbanaha
Posted by: Ahmed Haaddi 23 days ago
Himilo – Saxaafadda oo ah shaqo la xiriirta soo uruurinta, turxaan bixinta iyo soo saarista xogo wax ku kordhinaya ogaalka dadweynaha, waxa dunida loo tixgaliyaa awoodda afaraad, waana tan illaaleysa kooxda talada haysa si loo xoojiyo isla xisaabtanka.
Waxey badankeed tabisaa dhacdooyinka maalinlaha ah ee ka dhaca guud ahaan caalamka iyada shacab ku gaarsiisaan hab maqal, muuqaal amaba mid daabacan oo warsidaha tusaalle loogu soo qaadan karo.
Si ay xogaha ay tabineyso u hesho waxey warbaahintu had iyo jeer ku xiran tahay ilo wareedyo kala duwan oo qaarkood dowli ah iyo kuwa aanan dowli ahayn, iyada oo ku dadaaleysa in macluumadaasi noqoto mid watada caddeymo, si aanan loo marin habaabin bulsha weynta.
Shaqadaasi oo ruuxa qabanaya loo yaaqo wariye, si ay u noqoto mid hufan waxaa la dejiyay qarniyaal kahor anshax amaba hab-raac wariye waliba ku qasban yahay inuu raaco si uu u kasbado indhaha amaba dhagaha dadka ku xiran. Waxaa ugu muhiimsan run sheegista, iyada oo aanan loo gafeyn qofna.
Waa wax caadiyan ka dhaca gudaha xarumaha warbaahinta in ruuxa wariyaha ah loo diro goob si uu usoo uruuriyo xog, usoo wareysto shaqsi/yaad, uga soo sameeyo baaris cilmiyeysan amaba soo qaado sawiro iyo muuqaalo, waa mararkan xilliyada lagu dardaarmo inuusan baahin xog wax u dhimayo sumcad qof. waana halkan meelaha loo soo qaato oraahda caan noqotay ee “Run sheegistu maha sumcad dil”.
Marka la leeyahay sucmad dil ma ah oo kaliya inaad faafiso warar amaba wareysi loogu gafayo sharaf ruux kale, balse xittaa waxaa soo gasha illaalinta sumacdda dadka sheekadaada ku jira guud ahaan.
Tusaalle Marka aad la kulanto goob uu ka dhacay shil amaba qarax waxaa anshaxa saxaafadda wariyuhu ka mamnuucaa inuu qaado muuqaalo amaba sawiro haddii la baahiyo waxyeelo u geysan kara sharafka qof dhibanaha ah, taasi baddelkeedana waxaa lagu taliyaa inuu caawiyo.
Dhanka shaqooyinka ugu adag ee sidoo kale wariyuhu qabto waxaa ka mid ah tabinta wararka la xiriira dabiya, sida dhac loo geystay hanti ummadeed amaba mid shaqsi.
Is la mid ah baahinta sheekadii hore waxaa halkan wariyaha lagula taliyaa inuu ka taxadaro erayada uu adeegsanayo, waxaana laga macnuucaa warbaahintu inay adeegsato muuqaalka amaba sawirka qof eedeysana ah oo aanan la saarin wax humaag ah.
Warbaahinadda dunida ayaa u saara tabinta sheekooyinka danbiyada la xiriira wariyeyaal gaar ah, kuwaasi oo la baro tabaha tabinta wararka noocaasi ah waxaana sidoo kale la baraa xeerarka dalka u yaala ee la xiriira danbiya.
Badi Warbaahinteenna iyo guud ahaanba tan Africa malaha fursadahaasi waana tan inta badan keenta khaladaadka ka dhaca suxufiyiinta inta ay ku guda jiraan tabinta dhacdooyinka sida qaraxyada iyo dhaca loo geysato dadweynaha qaar ka mid ah, markaasi oo la arko muuqaalka amaba sawirka qof dhaawac ah oo aanan indhaha loo dhammeyn karin.
Previous: Takehiro Tomiyasu oo dagaal North London Derby ah ka dhex abuuray suuqa